‘अमीत वासना’ – कथा – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
– म एक्ली छोरी । आस्था भन्छन मलाई । म असाध्य पुलपुलिएकी छु रे ! त्यही भन्छन मेरा फुपुदिदीहरु पनि । खै मलाईत त्यस्तो लाग्दैन। म त्यस्तो के मात्तिएकी छु र । कुरा काट्न सिपालु मेरा फुपीहरु । तिन्का देवरलाइ माग्दा बिहे गरिन त्यै भएर कुरा काट्छनि जहिल्यै । कुनै कुराको अभाव छैन मलाई । बाबा ले जे भन्यो त्यही पुर्याइदिएका छन । हाम्री फुपुको एकजना देवर अभय । कहिलेकाही फुपुसग हाम्रा घरमा आउछन । घोडा चढ्ने बाहनाले मलाई हेर्न आउछन । आउदा घोडा चढ्नु उन्को सौख पनि होकि वा मलाई सान देखाउन पो होला कि कुन्नी। हाम्रो घरमा दुइटा घोडा थिए । घोडचढी मेरो बाबाको ठुलो सौख हो। तबेलाबाट जहिल्यै मलाई नै घोडा निकाल भन्नुहुन्थ्यो बाबाले। घोडा निकाल्दा प्रायः फुर्के निकाल भन्नुहुन्थ्यो । फुर्की घोडेनी चै एक बर्ष अगाडि जङ्गलमा चराउन लगेको बेला बिषालु घास खाएर बिति । फुर्कीको मृत्युुले एक महिना सम्म म शोकशुन्यमा डुबेकी थिए ।
बाबाले प्यारले राखेको नाम फुर्के र फुर्की । यी दुवै बोइ फ्रेन्ड र गर्ल फ्रेन्ड थिए । अब फुर्की छैन । फुर्के एक्लै भएको छ । फुर्की बितेपछि फुर्के स्वाठ पल्टेको छ ।
फुर्की बितेपछी एक हप्ता सम्म फुर्केले घाँस पानी दाना केही खाएन । यो पनि शोकमा डुबेको थियो । यस्को आँसु देखेथे मैले । घोडा रुन्छ भन्थे बाबाले हो रहेछ । फुर्की बितेपछी अब सम्पुर्ण माया स्नेह स्याहार सम्भार फुर्केले पाउन थाल्यो । फुर्की मर्दा मैले एस एल सि पास गरेर कलेज ज्वाइन गरेकी थिए। अहिले मैले प्लस टु पनि सकिसके । फुर्की नभए पछि फुर्केले डबल स्याहार पायो ।
फुर्के पहिले भन्दा फुर्तिलो हुँदै आयो । फुर्के मोटो चिल्लो सलक्क परेको कालो हुँदै लरक्क पर्दै घोर्ले बैशमा प्रवेश गर्न थाल्यो । म तबेलामा त्यस्लाइ दाना खुवाउन जादा पहिला भन्दा जब्बर सग हिनहिनाउथ्यो । फुर्केलाइ थाहा छ कि मैले उस्को गर्लफ्रेन्डलाई कति धेरै माया गर्थे । त्यो कारणले पनि मलाई फुर्केले असाध्य आदर सम्मान गर्थ्यो । उस्को घोडेनीलाइ माया गरेको हेरिरहन्थ्यो पहिला फुर्की जिवित हुँदा । फुर्केको पुछारको रौ पनि अहिले त कस्तो कालो देखिन्छ । चलाउदा पनि कोमल लाग्छ । बाबा कहिलेकाही जङ्गलतिर सिकार खेल्न जादा फुर्केलाइ लिएर जानुहुन्छ । फुर्के हाम्रो परिवारको सान मान र इज्जतको प्रतीक थियो । तबेलामा घोडा नभए हाम्रा बाबालाइ निन्द्रा नै आउदैन रे !
कहिलेकाही अलिक ईष्र्या पनि गर्थ्यो फुर्के ,कि उसलाई पनि पहिला उस्को फुर्कीलाइ जस्तै त्यस्तै माया गरोस भनेर । म स्त्री त्यसैले घोडालाई त्यस्तै माया दर्शाउन अलिक लाज लाग्थ्यो । मलाई अहिले सम्झना छ कि एकदिन छुट्टीमा फुर्के फुर्की दुवै चौरमा मज्जाले घास खादै थिए । पानी हल्का परिरहेको थियो । वरिपरि कोहि पनि थिएनन । फुर्केले फुर्कीलाइ कस्तो माया गरेको देखे मैले । तिन्को माया गराइ देखेर म त भैमा थुचुक्कै बस्न पुगेछु
पछि फुर्की त पाहुनी पो भै छ । मलाई त्यो दिन फुर्की देखेर खोइ किन हो कुन्नी कस्तो रिस उठेर आथ्यो तर केही बोलिन ।
बच्चा नहोस भनेर फुर्के फुर्कीलाइ अलग्गै राखिएको थियो । तर पछि फुर्केले हिनहिनाएर राती बाबालाइ सुत्नै दिदैनथ्यो रे ! । राती तबेला गएर फुर्केलाइ फुकाइदिदारहेछन । बिहान उठदा जहिले पनि फुर्के फुर्कीको कानमा चाटिरहेको देख्थे ।
फुर्कीको देहावसान पछि फुर्के मात्रै तबेलामा हुन्थ्यो । बाबाले कतै जादा फुर्के लिएर जानुहुन्थ्यो । जहिले पनि फुर्के निकाल भन्नुहुन्थ्यो मलाई । बाबाको आग्रह स्वीकार गर्दै जहिले नि म फुर्केलाइ तबेलाबाट आगन सम्म निकाल्थे। मैले अहिलेसम्म फुर्के माथी चढेकी छैन ।
फुर्की माथी चढ्न लाज लाग्दैनथ्यो । तर यो त फुर्के पो हो त कसरी चढ्नु यो माथी ?
फुर्की बितेपछी फुर्के मात्रै मेरो मिल्ने साथी भो । बाबाको युरिक एसिड बढेकोले घोडा कम चढ्न थाल्नु भएको थियोे । कहिलेकाही अभय आउदा मात्रै हामी घोडा निकाल्थ्यौ । अभय हाम्रो घर पछाडिको बारिको पाटाेमा फुर्केलाइ दौडाउथ्यो । फुर्केलाई अब अभयले मात्रै चढ्ने भो । मलाई इस्या लाग्न थाल्यो । फुर्केले भन्र मात्रै नसकेको पो हो त उस्को कुरा । फुर्केले म उसमाथि चढिदिए हुन्थ्यो जस्तो गर्थ्यो जहिले नि। अभय उस्को बुइ चढेको फुर्केलाइ त्यति मन पर्दैनथ्यो । अभय मलाई खुब सान दिएर दौडाउथ्यो ।
म सोचिरहन्थे कि मेरो घोडामा उस्को रजाइ ! कहिलेकाही त दिक्क लाग्थ्यो । अभय किन आको होला हाम्रो घरमा जस्तो लाग्थ्यो । मलाई उ देखि रिस उठ्न थाल्यो। उस्ले फुर्के दौडाको मात्रै म कति हेरिरहनु । मलाई अभय देखि घृणा लाग्न थाल्यो अब । फुर्के म नजिक आउथ्यो थाकेर । म उस्को गाला सुमसुम्याइ दिन्थे । जिउमा कन्याइ दिन्थे । कान कन्याइ दिन्थे । रौ मुसारिदिन्थे । अभय रिसले मुर्मुरिन्थ्यो खै किन पो हो । अभयले मलाई पनि चढ भन्थ्यो घोडा । मलाई अगाडि राखेर उ फुर्केलाइ दौडाउन चाहन्थ्यो । तर म अहिलेसम्म फुर्के माथी उक्लिएकी पनि छैन । चढ्नु नै परे म एक्लै चढुला नि तेरो सहारा मलाई किन चाहियो र भन्थे मनमनै
एक दिनको कुरा हो । घरमा कोहि पनि थिएनन, मात्रै फुर्के र म । फुर्केलाइ दाना खुवाउन तबेला छिरेकि थिए । फुर्के मलाई देखेर मज्जाले खुसी भएर हिनहिनायो । फुर्की बितेको पनि तीन बर्ष भैसकेको थियो ।
फुर्की जिवित हुदा उस्की फुर्कीलाइ माया गरेको एकोहोरो भएर हेर्थ्यो मलाई फुर्के । उ चाहन्थ्यो होला फुर्कीलाइ जस्तै उसलाई पनि जिउमा सुमसुम्याओस । कन्याइ देओस । चलाइ देओस । स्नेह गरोस । पुलपुल्याइदेओस। कहिलेकाही त फुर्के मलाई आँखा पो तर्थ्यो। म बुझ्थे उस्को मौन भाषा । फुर्की छोडेर उस्लाइ समाउन जादा पनि फेरि फुर्कीले बिरोध गरि भने के होला । मेरो बोइ फ्रेन्डलाई नछो भन्ली भन्ने डर । आखिर उ पनि त पोथी त परि । पोथीहरु प्रायः आफ्नो भाले आफ्नै मात्रै होस भन्ने चाहन्छन । खै त्यस्तो पो लाग्थ्यो मलाई । मलाई जस्तै अरुलाइ पनि यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होला कुन्नी !
आज म एक्लै फुर्के पनि एक्लै। फुर्केलाइ दाना पानी खुवाए । अघिपछि भन्दा आज फुर्के कस्तो राम्रो लाग्यो मलाई । कालो सलक्क परेको जिउ । कस्तो रहर लाग्दो भएको छ फुर्के । उस्को खुर ,नाक, आँखा, आँखा वरिपरि झपक्कै बढेको काला रौ । हेर्दाहेर्दै फुर्के कस्तो सुडाैलो भो । लोभ लाग्दो भो फुर्के । फुर्केको गर्दनमा छोए। उस्ले उस्को मुख मेरो छातीमा राख्यो । हिनहिनायो । मलाई सुघ्यो बेस्सरी । उस्को श्वास बढेको मलाई अनुभुती भो । उस्को चिल्लो जिउतिर छामे मैले । हातले कन्याइ दिए फुर्केको कस्सिएको फिला वरिपरि । फुर्के खुसीले फुर्फुर भयो । उ कस्तो हिल्लियो जस्तो उ फुर्की सग हुँदा उ हिनहिनाउथ्यो । बेस्सरी कन्याउदै थिए फुर्केलाइ । फुर्के त मात्तिन पो थाल्यो । मलाई कस्तो लाज लाग्यो । तबेलामा कोहि आए भने के भन्लान मान्छेले भन्ने डर पनि लाग्यो । यसो तबेला बाट बाहिर हेरेको कोहि पनि थिएनन । धन्न बेस्सरी बढेको धड्कन एकछिन शान्त भो ।
फेरि तबेला भित्र छिरे । फुर्के मात्तिराको थियो । खै के भएको मलाई फुर्के मात्तेको हेर्न मन लागेको आज । यस्तो त कहिले नि भएको थिएन । छि ! के भएको मलाई ? । फुर्केलाइ बेस्सरी छुन मन लाग्यो । छोए। छोइरहे फुर्केलाइ । कन्याइदी रहे । फुर्के मात्तियर खपिसक्नु छैन । छि किन हिनहिनाको यो ? छि कस्तो बौलाहा भएको यो ।
खुट्टामा बाधेको सानो साङ्लो चुडाल्नै पो खोज्दै छ त । होइन के भएको हो यो आज ?
फुर्के मात्तिएर खपिसक्नु छैन । यस्तो मात्तिएको मैले कहिले देखिन । फुर्केलाइ आज कहिले नआको कुर्कुरे बैँस पो आएछ । फुर्के मलाई टोक्न खोज्दैछ ।
मलाई के भएको यस्तो । फुर्केलाइ छुन मन लाग्ने । कन्याइदिन मन लाग्ने । अहिलेसम्म म फुर्के माथी चढेकी थिइन । फुर्केको गालामा म्वाइ खाए । फुर्केलाइ बेस्सरी अगालोमा बाधे । फुर्केको सबै जिउभरी कन्याइ दिए । छोइ दिए बेस्सरी । बेलाबेलामा फुर्के हिनहिनाएर मात्तिन्छ । खोइ किन पो हो उस्को त्यो मत्ताइ मलाई पनि मन पर्यो । छेउमा राखेको काठि र लगामले उस्लाइ कसे ।उस्को मोटाे फिलामा हातले हिर्काए र लगाम समातेर उ माथी चढे। सलक्क परेको अ्मृसोको लामो कुचो जस्तो पुछार ठाडाे पार्यो फुर्केले । आज म फुर्के माथी चढे । फुर्ती आयो मेरो । खुसी भए । कोहि छैन बाहिर । फुर्केलाइ लिएर म घर पछाडीको बारिमा गए । फुर्केलाइ बेस्सरी दौडाए । कुदाए । उ आज धेरै खुसी छ । फुर्की हुदाखेरिको चकचकी देखाउदै छ आज उ ।
यस्तो कुदाएकी यस्लाइ असिन पसिन पारिदिए मैले। अघि बेस्सरी मातिएर छिल्लिएको स्वाद चखाए यस्लाइ । आराम नै गर्न दिन ।
यो थाक्यो होला भनेर तबेलामा लिएर गए फेरि । उस्को फुर्की पो सम्झिन्छ त मलाई । फेरि फेरि मातिन्छ । यो मात्तिएको बेला कोहि मान्छेले देखे भने छि के भन्लान् । यो मात्तिदा मेरो पनि स्वाशप्रश्वास किन बढ्छ ह ?
फेरि चलाइदिए यस्को सबै जिउ । सन्चो मानेर थामिन्छ यो । एक्छिन पछि फेरि मात्तिन्छ । यस्को सबै जिउभरिका रौ कस्तो डाडाे पार्छ यस्ले । कस्तो कसैलाई नआएको बैँस यस्लाइ नै आउदो रहेछ । घोडा छिल्लिएको भनेको यहि होला । खोइ आज मलाई नि के भएको हो कुन्नी ! । कसैले देखे के भन्लान ? डर पो लाग्यो । फुर्केलाइ एक थप्पड गालामा हाने । उ त झन सन्चो पो मान्छ । र मेरो छातीमा आएर मुख राख्दै हिनहिनाउछ । लामो श्वास फेर्छ । मोरो फुर्केको आँखा नै राम्रो । फिला नै कसिलो । कसैलाई नआको बैँस यस्लाइ मात्रै आउदोरेछ । नकचरो । चोर फुर्के । काले फुर्के ।
भोलिपल्ट अभय तबेला बाट घोडा निकाल भन्दै आएको थियो । खोइ किन हो यो पाली चै मलाई रिस उठ्यो । हप्काएर पठाइदिए । उ भन्दै थ्यो “आस्था तिम्लाइ फुर्केमाथी चढ्नु लाज लाग्छ हैनर” ? केही बोलिन उस्को अगाडि । तर मेरो मनले भनिरहेको थियो-
” मेरो फुर्के अब म मात्रै चढ्ने हो ।”
२०७५ कार्तिक ४ गते आइतबार
शिवपुरी गाउपालिका / गुर्जेभन्ज्याङ्ग, शिवपुरी